‘Nyoka yeraki yandishupa’ | Kwayedza
11 Jan, 2019 - 00:01	 2019-01-10T07:29:14+00:00 2019-01-11T00:05:52+00:00 0 Views
Felex aine nyoka yake
Hazel Marimbiza ari kuESIGODINI
“MAPURISA, mapurisa! Ndauya kuzosiya nyoka yangu yeraki iyi kwamuri, ini yava kundinetsa. Zvayava kuda handichazvikwanisa . . .”Mapurisa anoshandira paZRP Esigodini Police Station, kudunhu reMatabeleland South, svondo rapera akasara asina nechekutaura apo mumwe murume akasvika nenyoka yaainge akamonera muhuro make achiti ndeyake uye aida kuisiya pakamba apa sezvo ari kuti haachakwanise kuramba achiichengeta.
Murume uyu anoti zvava kudiwa nenyoka iyi — kusanganisira zvainodya — haachazvigona zvisinei nekuti agara nechikara ichi kwenguva refu achichisevenzesa semushonga weraki.
Murume uyu — uyo anongozviti Felex — anobva kuHabane Township akachema-chema kumapurisa achivakumbira kuti vatore nyoka iyi.
Felex ari kuti ava nemakore akawanda achigara nenyoka iyi murunyararo asi hondo yazotanga apo ave kukundikana kuipa chikafu chainoda uye chainoguta.
Mumwe mupurisa pakamba iyi, uyo anokumbirisa kuti zita rake risadurwe sezvo mutemo webasa rake usingamutendere kutaura nevatori venhau, anoti, “Felex agara nenyoka yake kwemakore sezvo achivimba kuti inomupa mhanza yakanaka mune zvose zvaanoita muupenyu hwake. Munguva pfupi yadarika, nyoka iyi yakatanga kumushungurudza nekuti yange isingachaguta chikafu chainopihwa.
“Auya nenyoka iyi kukamba yedu ndokukumbira kuti timuchengetere. Anoti haasisina chikafu chekuipa nekudaro yave kumushungurudza.”
Zvisinei, mutauriri wemapurisa kudunhu reMatabeleland South, Philisani Ndebele, vanotsinhira nyaya iyi.
“Takamuudza kuti atore nyoka iyi aende nayo kune vebazi reZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority (Zimparks),” vanodaro.
Asi mutauriri weZimparks, VaTinashe Farawo, vanoti hapana nyoka yakaunzwa kubazi ravo nemunhu uyu.